शेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको प्राइम लाइफको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home लगानी शेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको प्राइम लाइफको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
शेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको प्राइम लाइफको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ६ करोड ३४ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिकोभन्दा १ सय ७९ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको आम्दानी १ सय २७ प्रतिशतले बढेकाले नाफा बढ्न सहयोग पुगेको हो । सोही अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २५ प्रतिशतले बढेर रू. ६१ करोड २ लाख र जगेडा कोषको रकम २६ प्रतिशतले बढेर रू. ९० करोड १२ लाख पुगेको छ । कम्पनीले बीमा कोषमा रू. ५ अर्ब २१ करोड रकम छुट्याएको छ । साथै, कम्पनीले पूँजी वृद्धिका लागि १ बराबर १ दशमलव ६०(१ः१.६०) अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोनमा) कात्तिक २७ गते निवेदन दिएको छ । निवेदन दिएसँगै कम्पनीले रू. एक सय अङ्कित दरको ६१ लाख २ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सो हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँट पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ९ करोड ८३ लाख ६० हजार पुग्नेछ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. १८२९
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू.२९००
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू.८९१
१८० दिनको भारित औसत मूल्य : रू. २४५६.८०
अध्यक्ष : पियुषराज अर्याल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : मनोज कुमार भट्टराई
प्रधान कार्यलय : हात्तीसार, काठमाडौं
वेबसाइट : www.primelifenepal.com
स्टक टिकर : पीएलआइसी
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ४ दशमलव ६५ प्रतिशतबाट बढेर १० दशमलव ३९ प्रतिशत पुगेको छ । हाल कम्पनीले महा विपत्ती कोषमा रू. ७ करोड ८५ लाख छुट्याएको छ ।
कम्पनीको दीर्घकालीन लगानी तथा कर्जा यो त्रैमासमा २ सय ५४ प्रतिशतले बढेर रू. ३ अर्ब ८४ करोड १७ लाख पुगेको छ भने खुद चालु सम्पत्ति ३३ प्रतिशतले घटेर रू. २ अर्ब ४५ करोडमा सिमित भएको छ ।
कम्पनीको आय रू. १ अर्ब १ करोड ७६ लाख र व्यय रू. ५७ करोड ७५ लाख छ ।
यो त्रैमासमा रू. ५१ करोड ३४ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कुल कायम रहेको बीमा लेखको सङ्ख्या ५ लाख १ हजार ८ सय ३० रहेको छ ।
कुल जारी बीमालेखको सख्या १५ लाख २७ हजार २ सय ९३ पुगेको छ भने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम रू. १ करोड ७१ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४१ दशमलव ५८, मूल्य आम्दानी अनुपात ४५ दशमलव ४५, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. १ हजार २ सय ४२ दशमलव १८ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय ६० दशमलव ५७ रहेको छ । आइतवारको मूल्य नेटवर्थको ७ गुणा छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको आइतवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप करीब ३ गुणा बढी भएको छ । सो अवधिसम्म २ हजार ८ सय कित्ता शेयर खरीद र ९ सय ८६ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
२७ अगष्ट २०१७ २६ नोभेम्बर २०१७
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ५४ दिनको कारोबारमा अन्तिम दिनमा सेतो मैनबत्ती आकृती बनेको छ । यसले आगामी दिनमा शेयर मूल्य बढ्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआई : कम्पनीको ५४ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन (४६ दशमलव ५६ स्केल) मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन : कम्पनीको ५४ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन १९ दशमलव ३७ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ५४ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने र २६ दिने औसत मूल्यरेखा माथि छ । यदि हालको मूल्य रू. १ हजार ८ सय २९ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भइ मूल्य महँगिएमा रू. १ हजार ८ सय ४० मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने सस्तिएमा रू. १ हजार ७ सय ७० मा टेवा पाउन सक्छ ।